तानातान हुँदै प्रदेशको राजधानी : १ नम्बर प्रदेशका लागि कुन ठाउँ उपयुक्त ?
Thu, Jul 19, 2018 | 16:01:09 NST
06:56 AM (7months ago )
सुनसरी, पुस ७ – सरकारले ठाउँ टुंगो नलगाउँदा प्रदेश नम्बर एकको राजधानी कहाँ बनाउने भनेर तानातान सुरु भएको छ ।
चुनावमा उम्मेदवार बनेकाहरुले आफ्नै ठाउँमा राजधानी बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका कारण पनि अहिले यो मुद्दा पेचिलो बन्दै गएको छ । भोट बटुल्न आश्वासन बाँडेका नेताहरुलाई अहिले चुनाव जितेपछि आश्वासन पूरा गर्ने दबाब पर्न थालेपछि कतिपय शहरमा त आन्दोलन नै सुरु गरेका छन्
चुनावी मुद्दाका रुपमा उठाएका ऐजेन्डा पूरा गर्न अहिले स्थानीय राजनीतिक नेतृत्वलाई ठूलो दबाब छ । यही दबाबका कारण अहिले प्रदेश नम्बर १ को राजधानी कहाँ बनाउने भन्ने बहस सुरु भएको छ ।
प्रदेशको राजधानी बनाउन माग राख्दै अहिले प्रदेश नम्बर १ का विभिन्न शहरका बासिन्दा राजनीतिक दलका नेता, सामाजिक संस्थाका अगुवा राजनीतिक लविङमा तल्लिन छन् । विराटनगर, इटहरी, धरान र धनकुटाले अहिले जोडतोडका साथ राजधानीको माग उठाएका छन् ।
धनकुटामा त राजधानी बनाउन आन्दोलन भइरहेको छ । विराटनगर महानगरपालिका, धरान उपमहानगरपालिका र इटहरी उप–महानगरपालिकाले पनि राजधानीको माग राख्दै सरकारलाई आधार पत्रसहित ज्ञापन पत्र बुझाइसकेको छ । ती शहरका राजनीतिक दलका नेता, सामाजिक संघ संस्थाका अगुवाले पटकपटक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर दबाब दिएका छन् ।
पार्टी भित्र पनि राजधानीका विषयमा दबाब सुरु भएको छ । मोरङको गोठगाँउका बासिन्दाले समेत प्रदेशको राजधानी बनाउन माग राख्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् । एक साताअघि मोरङको गोठगाँउ स्थित पूर्वाञ्चल बिश्वविद्यालयको भवनमा प्रदेशसभा बैठक गर्ने अनौपचारिक हल्ला चलेपछि त्यहाँका बासिन्दाले समेत राजधानीको माग जोडतोडका साथ उठाएका छन् ।
यसरी शहरैपिच्छे माग हुन थालेपछि राजधानी कहाँ बनाउने भन्ने अन्यौल छ । मन्त्रिपरिषदको बैठकले सुनसरी, मोरङ र धनकुटालाई प्रदेशको राजधानी बनाउनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरेको छ । यसका लागि प्रतिवेदन समेत सबै शहर र जिल्लाले बुझाएका छन् । तर कहाँ राजधानी बनाउने भनेर निर्णय गर्न नसक्दा बिबाद लम्बिँदै गएको छ ।
यस्ता छन् राजधानी माग गर्ने शहरहरु
विराटनगर प्रदेश नम्बर १ को एक मात्रै महानगरपालिका हो । यो बाहेक औद्योगिक शहर पनि भएकाले आर्थिक रुपमा विराटनगरलाई सम्पन्न शहरको रुपमा लिन सकिन्छ । विराटनगरलाई औगेगिक शहरका रुपमा मात्रै नभएर राजनीतिक शहरका रुपमा समेत लिने गरिन्छ । राणा विरोधी आन्दोलनको नेतृत्व गरेको विराटनगरले पञ्चायती व्यवस्था बिरुद्ध भएको आन्दोलन र २०६२/०६३ सालको आन्दोलनको समेत नेतृत्व गरेको मान्नेहरु धेरै छन् ।
विराटनगर प्रदेश नम्बर १ को एक मात्र महानगरपालिका भएका कारण समेत विराटनगर नै प्रदेशको राजधानी हुनु पर्ने माग यहाँका बासिन्दाको छ । विराटनगर महानगरपालिकका मेयर भीम पराजुली प्रदेशको एक मात्रै महानगरपालिका, संवैधानिक व्यबस्था अनुसार उच्च अदालत विराटनगरमै भएकाले प्रदेशको राजधानी पनि विराटनगर नै हुनु पर्ने दाबी गर्नु हुन्छ । यो बाहेक भौतिक पूर्वाधारको विकास तथा ऐतिहासिक र पौराणिक शहर पनि विराटनगर भएकाले विराटनगर प्रदेशको राजधानी हुनु पर्ने उहाँको तर्क छ ।
प्रदेशको राजधानी बनाउनका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधार विराटनगरमा अहिले नै छ । मेयर पराजुलीले भन्नुभयो ‘राजधानी बनाउन आवश्यक पर्ने पूर्वाधारका लागि विराटनगरमा एक रुपैयाँ पनि खर्च गरिरहनु पर्दैन । विराटनगरमा एयरपोर्ट, प्रदेशसभा बस्नका लागि सभा गृह, मुख्य मन्त्री र मन्त्रीहरुलाई बस्नका लागि क्वाटर, मन्त्रालय राख्नका लागि प्रशस्त भवनहरु छन् । १७ वटा क्षेत्रीय कार्यालय र ती कार्यालयलाई मन्त्रालय र प्रमुख बस्ने निवास मन्त्री निवास बनाउन सकिन्छ । त्यो बाहेक विराटनरमा विश्वविद्यालय, शिक्षण अस्पताल र सुबिधा सम्पन्न स्वास्थ्य संस्थाहरु भएका कारण विराटनगर प्रदेशको राजधानी हुन सक्ने तर्क विराटनगरका बासिन्दाको छ ।
विराटनगरलाई राजधानी बनाउन सबै कुराले पुगेको छ तर सामारीक महत्वलाई हेर्ने हो भने विराटनगर प्रदेशको राजधानी बनाउन नमिल्ने तर्कहरु पनि छन् । विराटनगर भारतीय सीमासँग जोडिएको शहर हो । सिमानामा जोडिएको शहरलाई राजधानी बनाउन नमिल्ने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र नजिरले मात्रै विराटनगरलाई राजधानी बनाउनबाट रोक्ने विराटनगरवासीकै तर्क छ ।
इटहरी पूर्वको हुर्कंदो शहर हो । बसोबासको हिसाबले इटहरी उपयुक्त छ । मिश्रित बसोबास भएका कारण यहाँको विकास दुई गुणा रात चौगुणाको दरले बढिरहेको छ । २०५८ सालमा नगरपालिका भएको इटहरी अहिले उपमहानगरपालिका भइसकेको छ । नगरको राजश्व संकलन र आन्तरिक आय पनि बढि नै छ । यो बाहेक इटहरी सडक सञ्जालका हिसाबले प्रदेशकै केन्द्र हो । व्यापारिक शहरको रुपमा विकास भइरहेको इटहरीमा प्रशस्त मात्रामा खुल्ला जग्गा छ ।
नयाँ शहरको रुपमा निर्माण गर्ने हो भने इटहरी जति राजधानीका रुपमा उपयुक्त शहर अन्य छैनन्, तर खर्चका हिसाबले भने तत्कालका लागि महङ्गो पर्ने छ । इटहरीमा रहेको क्षेत्रीय कृषि अनुसन्धान केन्द्र तरहरामा रहेका भवन र जुट अनुसन्धान केन्द्र र त्यसको जग्गालाई तत्कालका लागि प्रदेश सभा र मन्त्रालयका रुपमा विकास गरिनुपर्ने इटहरी बासिन्दाको तर्क छ । तर यी सरकारी भवनले मात्रै प्रदेशका मन्त्रालयको भार थेग्न सक्ने अवस्था छैन । तत्काल अन्य भवनहरु समेत निर्माण गरिनुपर्ने देखिन्छ । अनि ती सरकारी कार्यालयलाई कहाँ सार्ने र कसरी व्यबस्थापन गर्ने भन्ने योजना भने बनाइएको छैन । सामारिक हिसाबको कुरा गर्ने हो भने इटहरी उपयुक्त मान्न सकिन्छ ।
नेपाली सेनाको पृतना यहीँ छ भने सशस्त्र प्रहरीको पूर्वाञ्चल बाहिनी पनि इटहरीमै छ । पूर्व क्षेत्रीय ट्राफिक कार्यालय समेत इटहरीमै भएकाले सुरक्षाका हिसाबले इटहरीलाई राजधानी बनाउन उपयुक्त मान्न सकिन्छ । तर भौतिक पूर्वाधारको कुरा गर्ने हो भने इटहरीको निर्माणलाई शून्यबाट सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ ।
शैक्षिक र स्वास्थ्य संस्था समेत इटहरीमा राजधानीको भार थेग्न सक्ने खालका छैनन् । खुल्ला स्थान र सरकारी जग्गा प्रशस्तै भएपनि निर्माण भने आवश्यक देखिन्छ ।
तर इटहरी नजिकै रहेको झुम्का, धरान र तरहरामा रहेका सरकारी जग्गा र भवनहरुलाई मन्त्रालय र मन्त्री निवास बनाएर इटहरीलाई प्रदेशको राजधानी बनाउनु पर्ने तर्क इटहरीलाई प्रदेशको राजधानी बनाउनु पर्छ भनेर लागेकाहरुको छ ।
‘संसारका अन्य देशका उदाहरणलाई हेर्ने हो भने योजना अनुसार शहर निर्माण गर्ने हो भने इटहरी उपयुक्त राजधानी निर्माणको स्थल हो’ इटहरी उपमहानगरपालिकका मेयर द्वारीकलाल चौधरीले भन्नुभयो, ‘नयाँ शहरको निर्माण गरि आधुनीक शहर बनाउन इटहरी उपयुक्त छ । जुन विराटनगर र धरानमा सम्भव छैन ।’
प्रदेशको राजधानी माग गर्ने प्रदेश नम्बर १ को अर्को शहर हो धरान । धरान उप–महानगरपालिका भएर मात्रै होइन, ऐतिहासीक शहर भएका कारण पनि धरानलाई प्रदेशको राजधानी बनाउनु पर्ने धरान बासिन्दाको माग छ । धरानको विजयपुर लिम्बुवानको राजधानी भएको र अहिले पनि यही ऐतिहासिकताको आधारमा धरानलाई प्रदेश नम्बर १ को राजधानी बनाइनु पर्ने माग राख्दै धरान बासिन्दा डेलिगेशन गइरहेका छन् ।
धरानमा राजधानी बन्नका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधार तयार नै रहेकाले पनि धरानलाई राजधानी बनाइनु उपयुक्त हुने उनीहरुको दाबी छ । धरान–८ को सभागृहलाई प्रदेश सचिवालयको सचिवालय र सभाहललाई उपयुक्त स्थान रहने जनाएको छ ।
यसैगरी बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको परिसरभित्र रहेको निर्वाणा कन्ट्री क्लबको भवन सभामुख र उपसभामुखको कार्यालयसहित मन्त्रीको कार्यालय राख्न उपयुक्त हुने भन्दै प्रतिवेदन बुझाइएको छ ।
मन्त्रीहरूको कार्यालय राख्नको लागि भने नेपाल टेलिकम, मालपोत तथा नापी कार्यालयको भवन, क्षेत्रीय हावापानी कार्यालय, पब्लिक भवन, पुरानो बजारमा रहेको अस्पताल अध्यापनको लागि तयार पारिएको भवन लगायत अरू पनि विकल्प सहितको स्थानका रुपमा सरकारलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रदेश १ को मन्त्रीस्तरीय पहिलो बैठक बस्न पनि धरानको बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको पुनर्स्थापना केन्द्र उपयुक्त हुने बताइएको छ । धरान नगरापालिकाका उपमेयर मञ्जु भण्डारीले ऐतिहसीक शहर, धार्मिक र पर्यटकीय गन्तव्यका साथै पूर्वाधार समेत भएकाले धरान नै प्रदेश नम्बर १ को राजधानी हुनु पर्ने बताउनुभयो ।
प्रदेश नम्बर १ को केन्द्रको रुपमा लिन सकिने धनकुटा पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रको राजधानी समेत हो । यसले पनि धनकुटालाई राजधानी बनाइनु पर्ने माग राखिनु नौलो भएन । वि.सं. १८४० देखि धनकुटा पूर्व क्षेत्रको प्रशासकीय केन्द्रको रुपमा स्थापित भएको हो । सुरुमा धनकुटाबाट पूर्वको केही भाग शासित थियो भने वि.सं. १८८५ देखि यो ठाउँ पूर्वको प्रशासनिक पूर्ण केन्द्रको रुपमा रह्यो । यसैलाई निरन्तरता दिँदै राणाकालीन समयमा धनकुटामा वडाहाकिम कार्यालय रहन गयो ।
वि.सं. १९४२ देखि धनकुटामा पूर्वका तीन अड्डाहरुको अपील सुन्ने गरिन्थ्यो ।
यही ऐतिहासिकताका आधारमा धनकुटालाई प्रदेशको राजधानी बनाइनु पर्ने माग राख्दै आन्दोलन भइरहेको छ । अर्को कुरा धनुकटामा पर्याप्त सरकारी जमिन र सरकारी कार्यालय रहेका छन् । ती सरकारी कार्यालय र भवनलाई मन्त्रालय र मन्त्री निवास बनाउन सकिने धनकुटा बासिन्दाको दाबी छ । पूर्वी पहाडी जिल्लालाई मध्यपहाडी राजमार्गले जोडिसक्ने हो भने यो केन्द्र नै पर्छ । यो बाहेक बासोबास र हावापानीका हिसाबले समेत धनकुटा उपयुक्त स्थान मान्न सकिन्छ ।